नीतिगत व्यवस्था नहुँदै बैंकास्योरेन्स सम्झौता – Insurance Khabar
नीतिगत व्यवस्था नहुँदै बैंकास्योरेन्स सम्झौता
प्रकाशित मिति : ८ भाद्र २०७५, शुक्रबार १०:५३
पछिल्लो समयमा प्रत्येक दिन बीमा कम्पनी र वित्तिय संस्था बिच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको समाचार पढ्न पाईन्छ । तर, बीमा कम्पनी र वित्तिय संस्था बिच हुने बैंकास्योरेन्स सम्झौताको बिषयमा समितिले नीतिगत कुनै व्यवस्था भने गरेको छैन । नीतिगत रुपमा व्यवस्था नगरिएसम्म बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरिनु जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
संस्थागत अभिकर्ताको सम्झौता गरी बैंकास्योरेन्सको झ्याली पिट्दै कम्पनीहरु
कम्पनीहरुले बैंकास्योरेन्स गरेको प्रचार प्रसार गरे पनि त्यो संस्थागत अभिकर्ता मात्र नभएको बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरु नै बताउँछन् । व्यवसायिक रणनीतिका लागी बैंकास्योरेन्स शब्दको प्रयोग गरिएकोे उनीहरु बताउँछन् । बैंकास्योरेन्स भन्दा बजारमा राम्रो प्रभाव रहने भएकाले बैंकास्योरेन्स भनिएको उनीहरुको दाबी छ ।
बीमा समिति मौन
नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था नभएको बैंकास्योरेन्सको बिषयमा कम्पनीहरुले झ्याली पिट्दै गरेपनि नियमनकारी निकाय समिति भने मौन छ । ऐनमा बैंकास्योरेन्सलाई बर्जित नगरेकै कारण यसलाई गैरकानुनी भनिहाल्न नमिल्ने समितिको तर्क छ । तर, बैंकास्योरेन्स निर्देशिका छिट्टै जारी गर्ने समितिको योजना छ । त्यस्तै संसदमा प्रस्तुत भएको नयाँ बीमा विद्येयकमा बैंकहरुलाई बीमा जारी गर्न पाउँने अधिकार दिइने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले विस्तारै अभिकर्तालाई बाईकट गर्दै यस्तो खालको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो ।
समितिले अभिकर्तालाई बाईकट गरी बैंकास्योरेन्स नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । विद्येयकमा गरिएको बैंकलाई बीमा जारी गर्न पाउँने व्यवस्था प्रति अभिकर्ताहरु आन्दोलित भएका छन् । समितिले गरेको यस्तो व्यवस्थाले हालको अभिकर्ताहरु विस्तापित हुने उनीहरुको दाबी छ । त्यति मात्रै नभएर निक्षेपकर्ताको निक्षेप पनि सुरक्षित नुहने उनीहरुले बताए । बैंकले प्रत्येक निक्षेपकर्ताको बचत हेरी बीमालेख जारी गर्ने भएकाले पनि गोपनियता नरहने अभिकर्ताहरु बताउँछन् ।
ऐनमा के छ ?
बीमा ऐन ४९ ले बीमा कम्पनीको योजना बिक्री वितरणका लागी बीमा अभिकर्ताको व्यवस्था गरेको छ । योग्यता पुगेको व्यक्ति वा कुनै पनि संस्थाले बीमा अभिकर्ताको लाईसेन्स लिन सक्ने बीमा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । एसएलसी उर्तिण गरी समिति वा समितिले अधिकार प्राप्त गरेको कम्पनीबाट अभिकर्ताको तालिम लिएको व्यक्तिले लाईसेन्सका लागी समितिमा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यसैगरी संस्थागत अभिकर्ताको हकमा भने संस्थाको एकजना सञ्चालकले कम्तिमा एसएलसी उर्तिण गरी त्यस्तो तालिममा सहभागी भएको हुनुपर्नेछ ।
के हो बैंकास्योरेन्स ?
बीमा कम्पनी र बैंक बिचको सहकार्य नै बैंकास्योरेन्स हो । बैंकले बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरी सम्बन्धित कम्पनीको योजनाहरु बिक्री वितरण गर्ने प्रक्रिया नै बैंकास्योरेन्स हो । बैंकास्योरेन्स गर्दा बैंक आफैले नै आफना निक्षेपकर्ता वा ऋणीलाई बीमा कम्पनीको योजना जारी गर्न पाउँछन् । यसको लागी बैंकमा बीमा गर्ने छुट्टै विभाग हुन्छ । बीमा गर्दा बैंक आफैले अण्डरराईटिङ्ग पनि गर्छ ।
बैंकले बीमितको खाताबाट बीमाशुल्क काटेर बीमा कम्पनीको खातामा राखी दिन्छ । त्यसैले दाबी पर्दा पनि बैंकले नै भुक्तानी गर्छ । तर, कति रकमसम्मको योजना बैंक आफैले नै जारी गर्न पाउने र कतिसम्मको भुक्तानी बैंकले नै गरिदिने भन्ने बिषयमा बैंक तथा कम्पनी बिच भएको सम्झौता अनुसार हुन्छ । कम्पनीको काम गरि दिए बापत बैंकले निश्चित कमिशन लिन्छ ।
जीवन बीमा कम्पनीका कर्मचारीको बोनस घट्यो, ९ महिनाको नाफाबाट २५ करोड ६९ लाख छुट्टियो
बीमा समितिले मर्जरका लागि किन दवाव दिदै छ ? यस्ता छन् प्रमुख कारणहरु
उत्तम उपहारको रुपमा फैलिदै बीमा पोलिसी, बचतसँगै जीवनको सुरक्षा
एक दशकमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा सरकारको ५ अर्ब ५ करोड अनुदान, कृषकले पाए जम्मा २ अर्ब ८८ करोडको दाबी
जनरल इन्स्योरेन्सले ३० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्दै, स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा पेश
बीमा समितिले नयाँ बजेटका लागि दियो ११ सुझाव, कर छुटदेखि गरिव जनताको बीमा गरिदिने
मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीले १५ वटा छुट तथा सुविधाहरु पाउने, २०८० असार मसान्त भित्र प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने
सिटिजन्स बैंकले माग्यो धेरै पदका लागि कर्मचारी, कहिलेसम्म दिने दरखास्त ?
प्राइम, गुराँस र युनियनले असार भित्रै मर्जर टुङ्गाउने, डिडिए अन्तिम चरणमा: नाम के होला ?
मर्जरको संझौतापत्र सहित बीमा समिति पुगे तीन कम्पनी
तीन बीमा कम्पनीलाई मर्जरका लागि समितिले दियो सैद्धान्तिक सहमति
दुई बैंकको विशेष सधारण सभा आज हुँदै, मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्ने
सांग्रिला डेभलपमेन्टका ग्राहकले सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपको सेवामा विशेष छुट पाउने
नबिल र नेपाल बङ्गलादेश बैंकको विशेष सधारण सभा भोलि हुँदै